Saron’ny tontolo hafa ny fiainam-bahoaka - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Saron’ny tontolo hafa ny fiainam-bahoaka
Mifamahofaho amin’ny tontolo politika tena manahirana ny fiainam-bahoaka ankehitriny, noho ilay resaka fikasam-pifofofoana ny ain’ny filoham-pirenena. Manjary sarona ilay fitodihana amin’ilay vahoaka tiana ampandrosoana sy ampivoarana eto amin’ny firenena.
« Dia gaga mihitsy aho amin’ny fampitam-baovao tao ho ao. Toa hadino tanteraka ilay mahamay ny vahoaka ankehitriny toy ity fidangan’ny vidin-javatra ilaina andavanandro ity. Toa tsy misy mpijery ! Vary sy laoka, saribao, sy filana madinika isan’andro dia efa majifa ny roa alina ariary. Ny tena loza aza, dia tsy misy fotoana tsy handrenesana vaky trano sy resaka dahalo amin’ny fampitam-baovao samihafa. Aina nafoy na takaitra amin’ny ratra, harena nisasarana lasa tanatin’ny fotoana fohy. Mampanontany tena ny amin’ny andraikitr’ireo lazaina fa tandroka aron’ny vozona, mpiaro ny mpitondra ihany sa mpiaro koa ny mponina tsy ankanavaka eto amin’ity nosy ity ? » Santionan-kevitry ny olom-pirenena mpanara-baovao izany, manoloana ny tontolom-piarahamonina ankehitriny.
Nahoana tokoa moa no tsy ho lasa ny saina manoloana ny zava-misy ankehitriny, izay mifanohitra amin’izay noandrandraina raha ny programan’asa nofaritana tamin’ny propagandy no itsarana ny toe-draharaha ? Lasa fialana olana ilay valanaretina ‘Covid 19’ atrehan’ny eran-tany. Tsy haingana araka ny teny filamatry ny mpitondra ny fivoarana fa fikorosiana aza no hita, ary voaporofon’ny antontanisan’ny mpahay toe-karena izany. Ho an’ny vahoaka dia tsy ilan-kajy izany raha ny vary sakafo fototra fihinan’ny maro ihany aza no handrefesana azy. Raha manodidina ny 1500 Ariary ny kilao no nambara, efa maherin’ny 2000 sy mananika ny 3000 ariary izany amin’izao, ary nisonga miandalana. Ny menaka fihinana no tena nampiteny ny moana, araka ny fiteny, satria dia tafakatra hatrany amin’ny 8000-11 000 Ariary ny litatra. Ilay nojifaina 5000 na latsak’izany talohan’ny nijoroan’ity fitondrana ity, roa taona sy tapany mahery izay. Ny fahasalamana moa dia fandre matetika ny hoe “aza mba marary ihany” fa henjana ny vidim-panafody ka raha tsy mahavidy ianao, dia izay mitranga atrehina, na taizan’aretina tsy voatsabo, na maty.
Maizimaizina ny tontolo
Tontolo matroka tahaka izany no misy eny amin’ny fiarahamonina. Fa tsy tahaka izay kosa ny any an-dapa raha ny fampitam-baovao voizina. Voafehy ny fitantanana. Mandeha ny asa fampandrosoana tarafina amin’ny fotodrafitrasa maro toy ny kianja manara-penitra, ny sekoly manara-penitra ary ny hopitaly manara-penitra. Firenena tan-dalàna isika. Miharihary anefa fa misy fifandroritana politika avo lenta eto amin’ny firenena, raha ny fanambarana samihafa re, na ny eo anivon’ny fitondram-panjakana, na ny ety ivelan’ny fitondram-panjakana. Samy malagasy daholo anefa ireo mifandrirotra.
Ka raha mbola tsy vitan’ny mpisehatra politika ny mihoatra ny disadisa mametraka ho laharam-pahamehana ny fitiavan-tena sy tombontsoan’olom-bitsy, dia hahantra lava ny vahoaka eto amin’ny firenena. Ary dia ho nofy mbola ho ela ny haha Madagasikara ho isan’ny firenena mandroso. Mitaky manam-pahaizana sy mpisehatra politika azo ianteheran’ny vahoaka hanova ny fanao ratsy eto amin’ny firenena. Sahy hamongotra tokoa ny kolikoly, ny kiantranoantrano anivon’ny rafi-panjakana samihafa. Fa ny vahoaka koa tokony handinika mba tsy hatoritory lava, hahay handanjalanja ny ambaran’ireny mpisehatra politika ireny eo amin’ny fampanantenana ny vina napetrak’izy ireny. Fa tsy amin’ny fotoam-pifidianana ihany vao mihetsika. Voahajan’ireo mpitantana ve ny nampanantenainy ? Araka ny nambarany tokoa ve ny fihatsaram-piainana andrandrain’ny vahoaka ? Mitodika tokoa amin’ny fampandrosoana sy fampivoarana ny fiainan’izy ireo ve ny ataony ?